ဖက်ရှင် O-Neck အစင်းပါသောစာတန်းပါသောလက်တိုတီရှပ်အင်္ကျီနှင့်ဘောင်းဘီ - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အကောက်ခွန်မရှိ | WoopShop®
ဖက်ရှင် O-Neck Striped Printed Letters လက်တိုတီရှပ်နှင့်အင်္ကျီ
$16.64 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $23.76
Kid အမေရိကန် Size ကို 3T 4T5678 9
3T / အနက်ရောင် 4T / အနက်ရောင်5/ Black က6/ Black က7/ Black က 8 / Black က9/ Black က 3T / Grey 4T / Grey5/ မီးခိုးရောင်6/ မီးခိုးရောင်7/ မီးခိုးရောင် 8 / မီးခိုးရောင်9/ မီးခိုးရောင်
ဖက်ရှင် O-Neck အစင်းပါသည့်စာတိုလက်တိုတီရှပ်နှင့်ဘောင်းဘီ - 3T / Black backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
pattern အမျိုးအစား: အစင်း
အရွယ် တီရှပ် (စင်တီမီတာ) တွေဆီကနေ *2(စင်တီမီတာ) Long ကဘောင်းဘီ (စင်တီမီတာ) အမြင့် (စင်တီမီတာ) အသက်အရွယ်
100 41 30 44 90-100 3T
110 44 32 46 100-110 4T
120 47 33 48 110-120 5T
130 50 34 50 120-130 6-7T
140 53 36 53 130-140 8T
150 55 38 55 140-150 9T
မှတ်ချက်: လက်စွဲစာအုပ်တိုင်းတာခြင်းကြောင့် 1-3cm ကွဲပြားခြားနားမှုကိုခွင့်ပြုပေးပါ။ စင်တီမီတာအားလုံးတိုင်းတာခြင်း, 1 လက်မ = 0.39 မတ်, 1 စမတ် = 2.54 လက်မသတိပြုပါကျေးဇူးပြုပြီး
качествохорошее။ нарост 110 смивес 19 кгхорошоселкостюм။
Заказполучила, доставкабыстрая, костюмхороший!
très satisfait! à 8 ans taille 8 (140), c'est bon ...
ငါ့ကို it.Perfect 100% ဝတ်ထားရှေ့မှာဆေးကြောဖို့အဘို့ကြီးသောအပိုင်းအစနှင့်ငါ၏သားမစောင့်နိုင်
ထိပ်တန်း ensemble, très bonne အရည်အသွေး, très satisfaite ။